Man United Oo Lacag Ka Badan 5 Billion ka heshay Tv, kuna bixinaysa Ronaldo, Bale iyo haysashada De Gea
HomeSuuqaMan United Oo Lacag Ka Badan 5 Billion ka heshay Tv, kuna bixinaysa Ronaldo, Bale iyo haysashada De Gea
16/02/2015 Abdiwahab Ahmed
Kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa ka heli doonta Telefishanka baahiya ciyaaraheeda lacag ka badan 5 billion oo Pound, taas oo u suurtogelin doonta in ay dib u soo ceshato xiddigeedii hore ee Cristiano Ronaldo, isla markaana ay garoonkeeda keento bartilmaameedkeeda koowaad ee Gareth Bale iyo in ay haysato gool-haye De Gea oo lala xidhiidhinayo Real Madrid.
Tallaabada ugu horeysa ee ay Manchester United qaadayso ee ay lacagtan u isticmaalayso ayaa waxa ay noqon doontaa in marka uu suuqa kala iibsigu furmo ay ka soo iibsato Real Madrid labada laacib ee Cristiano Ronaldo iyo Gareth Bale isla markaana ay fasaxdo Falcoa oo ku guul darraystay in uu ku qanciyo tababare Van Gaal in uu boos joogto ah ka siiyo kooxdiisa iyo in mushaharka loo kordhiyo David de Gea si uu kooxda u sii joogo .
Lacagtan ay Manchester United ka heli doonto Telefishanka oo dhan £5.136 billion ayaa waxa ay qorshaynaysaa kooxdu in ay kaga faa’iidaysato dibu-dhiska iyo in kooxdu mar kale noqoto mid awood badan oo ay ku sugan yihiin xiddigaha dunida ugu magaca weyn, ayna noqoto naadiga ugu magaca, sumcadda iyo lacagtaba badan. Waxa kale oo ay filaysaa in ay dib-u-ruxdo garoomada iyadoo hananaysa koobabka dalka Ingiriiska iyo Champions League.
Falcao oo ay da’diisu tahay 30 jir ayna daashadeen dhaawacyo xakameeyey xirfaddiisa ayaa waxa uu toddobaadkii mushahar u qaataa lacag dhan £285,000 taas oo niyad jab ku ah kooxda in ay siiso laacib aan inta badan saamayn ku lahayn kooxda.
Manchester United waxa ay dooneysaa in ay ka aargoosato Real Madrid oo ay xiddigaheeda ka soo iibsato, iyadoo taas lagu yaqaanay kooxda boqortooyada ee Spain.
David Beckham ayaa sannadkii 2003 ka tegay Manchester United kuna biiray Real Madrid kadib markii ay isku dhaceen tababare Sir Alex Ferguson. Ruud van Nistelrooy ayaa isna £35m ugu wareegay Real Madrid isaga oo ka tegay Man United. Waxad ku xigay Cristiano Ronaldo, iyadoo la hadal hayo in uu goolhaye David de Gea o ohayo wadadaas oo uu ku sii jeedo Real Madrid kaas oo uu heshiiska uu Manchester United kula jiraa dhamaanayo badhtamaha sannadka 2016, sharciguna u ogolaanayo in kooxda uu doono uu la xaajoon karo bisha January ee 2016, si xor ahna uu uga tegi karo badhtamaha sannadkaas.
Manchester United inkasta oo aanay ciyaaraynin sannadkan tartanka Champions League, haddana waxa si mucjiso lagu tilmaamay ay u gashay kaalinta labaad ee kooxaha dunida ugu qanisan, waxaana ka horeysa oo kaliya Real Madrid.
Xususta Sawirada Xiddigii Real Madrid Ka Iibsatay Manchester United
Sawir Laga qaaday Ronaldo maalinti u hosay ee uu xidhay funaanadda Real
Nisterooy oo garonka lagu soo bandhigayo maalintii u horeysay
Davi Beckham oo kor u haya Lambarka ay Real Madrid u xidhay.
Wiil Curyaan Ah Oo Ka Oohiyey Xulka Brazil
Wiilkan curyaanka ah ayaa soo bandhigay khibradiisa kubada cagta , waxaanu lugihiisa itaalka yar kubada ugu celceliyey si aad loola dhacay ka hor intii aanay xidigaha oo dhami ku soo ururin si uu khudbad yar ugu jeediyo , iyaguna dhagaystayaal uga noqdaan.
Daawo: Barcelona vs Atletico Madrid – Kulankii Isugu dambeeyey Ee Champions League